I-AulaGEO, izisa le khosi intsha ijolise kuyilo lwezixhobo, kusetyenziswa isoftware yeMicrostran, evela kwiiNkqubo zeBentley. Ikhosi ibandakanya ukufundiswa kwetiyori, ukusetyenziswa kwemithwalo kunye nokuveliswa kweziphumo. Intshayelelo kwi Microstran: Isishwankathelo Iibarbhulam ezahlukeneyo zeMicrostran kunye nemisebenzi.
Le yikhosi yokwazisa ngohlalutyo kunye noyilo lolwakhiwo kusetyenziswa isoftware ye-STAAD Pro evela kwiiNkqubo zeBentley. Kwikhosi uya kufunda ukumodareyitha intsimbi kunye nolwakhiwo lwekhonkrithi, uchaze imithwalo kwaye uvelise iingxelo. Okokugqibela uya kufunda ukumodareyitha, ukuhlalutya kunye noyilo lwee-slabs. IJometri kunye neModeli (iiNkcitho zentsimbi kunye neeKhonkrithi) Iinkcazo zomthwalo ...
Microstation -Funda uyilo lwe-CAD Ukuba ufuna ukufunda ukusebenzisa iMicrostation kulawulo lwedatha yeCAD, le khosi yeyakho. Kule khosi, siza kufunda iziseko zeMicrostation. Kwizifundo ezingama-27 zizonke, umsebenzisi uya kuba nakho ukuqonda ngokupheleleyo zonke iziseko. Nje ukuba izifundo zethiyori zigqitywe, siya kuqhubeka ...
Bentley Systems Iikhosi-zooRhulumente baseKhaya Iikhosi zeMicrostation